Nanolotra ny taratasy fanendrena azy ho ambasadaoro, solontena maharitry ny Repoblikan’i Madagasikara eo anivon’ny UNESCO tamin’i Audrey Azoulay, Tale jeneralin’ity Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny fanabeazana, siansa ary ny kolontsaina ity, i Yvette Sylla. Tao amin’ny foiben-toeran’ny UNESCO no nanatanterahana izany androany 8 oktobra 2019. Ny 18 septambra 2019 i Yvette Sylla, vady navelan’ny praiminisitra teo aloha sady efa filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha Jacques Sylla, no voatendry, nandritra ny filankevitry ny minisitra, ho Masoivohom-pirenena, sady solontena maharitr’i Madagasikara eo anivon’ny UNESCO ao Paris.
Nanao fanambarana i Botozaza Pierrot, fa rehefa nandinika izy sy ny ekipany dia hanohana an’i Nantenaina amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna hotanterahina amin’ny 27 novambra 2019. Praiminisitra lefitra misahana ny toekarena tamin’ny tetezamita i Botozaza Pierrot. Efa minisitry ny Fitaterana tamin’ny 2008, efa voafidy solombavam-bahoakan’i Toamasina tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara talohan’izay. Efa Tale jeneralin’ny SPAT (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina). Nirotsaka hofidiana tamin’ny anaran’ny tenany manokana ho depioten’i Toamasina I tamin’ny aprily 2019. Filohan’ny fikambanana ZAMI (Zanak'Ambanivolo Mivoatra) izy. Kandida narotsaky ny IRD amin’ny fifidianana Ben’ny tanànan’i Toamasina i Nantenaina, mitondra ny laharana voalohany (1) amin’ny bileta tokana. (Jereo Sary Tohiny)
Taorian’ny nidiran’Atoa Eric Rakotoarisoa, filohan’ny HCC ankehitriny teo amin’ny sehatry ny politika dia mirona any amin’izany ihany koa ankehitriny Atoa Andriamandranto Ralison. Fantatry ny maro tamin’ny fitarihany ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena) moa izy ireo, izay samy mpikambana tamin’io fiarahamonim-pirenena io avokoa, ary fantatra tamin’ny fanankianana mavaivay ny mpitondra tamin’izay fanehoan-kevitra navoakany. Tapa-kevitra ny nirotsaka ho kandidà Ben’ny Tanana eto Antsirabe, renivohitr’i Vakinankaratra Atoa Ralison Andriamandranto ankehitriny. Vina ho azy ny famerenana ny hasin’ny fitantanana ny tanàna hisian’ny fihavaozana marina, mba ho tanàna fitaratra eto Madagasikara i Antsirabe ka hametrahany fomba fiasa amin’ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny fanjakana sy ny mponina ary ny tompon’andraikitry ny tanàna.
Andriamanalinarivo Raymond Michel Jocelyn, Solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Antananarivo I, no nisantatra ny fametrahana ny tararatasy fanambaram-pananany teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC), tamin’ny 30 aogistra 2019. Taoriany i Milavonjy Andriasy Philobert, ny Solombavam-bahoaka tsy miankina voafidy tao Ambovombe Androy. Ny 01 oktobra 2019 no tafapetraka teny Ambohidahy ny taratasy fanambaram-pananany. Ny andininy faha-41 amin’ny Lalampanorenana no manery ny olom-boafidy hanao fanambaram-pananana mialoha ny handraisany ny asany.
Misaotra ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nitondra fanazavana tamin'ireo teboka maromaro momba ny fiainam-pirenena. Tsara ny toy ireny, tsy nisy loha-hevitra nodiana tsy hita, izay isaorana ireo mpanao gazety telo ihany koa, feno fasahiana nametraka ny fanontaniana. Na mitovy hevitra na tsia avy eo, ny zava-dehibe dia fantatra ny hevitry ny Filoham-pirenena, hita ny lalana tiany hombana. Nankafiziko manokana ilay fanentanana nataony ny rehetra hiaraka ampandroso ny Firenena, ny fitadiavana fitoniana, nefa koa mahazaka tsikera entina ampandrosoana, raha misy ny tsy mety, arahina soso-kevitra.
Nitondra fanazavana mikasika ny fivoahan’ny laza adina Bakalorea nialoha ny fotoana, sy ny savorovoro naterak’izany, tao amin’ny Radio Nasionaly Malagasy (RNM) io hariva io, ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, sady mpitondratenin’ny governemanta, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Nandritra izany no nilazany fa « Tsy manana eritreritra hamerina ny fanadinana Bakalorea ny governemanta ». Niaiky i Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo fa nisy ny fivoahan’ny laza adina Bakalorea nialoha ny fotoana, ary Faritra miisa 8 amin’ny 22 no voakasik’izany. Nanipika mazava ny minisitra fa « tsy ny taranja rehetra no nivoaka alohan’ny fotoana ». Nanamafy ny voalazan’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Pr Blanche Nirina Richard ny mpitondratenin’ny governemanta nilaza fa « misy finiavana hanao fanakorontanana ny Bakalorea ». « Efa nandray andraikitra ny fanjakana », hoy i Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo ary « mandeha, efa lasa lavitra sy lalina ny fanadihadiana ». Natsidikin'ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ity fandaharana manokana tao amin’ny RNM ity, fa hiteny amin’ny vahoaka malagasy ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina amin’ny alahady 6 oktobra 2019 izao.
jeudi, 03 octobre 2019 08:10
Tia Tanindrazana: Antoko mijoro ho vahaolan'ny firenena
Nampahafantatra ny fisiany sy ny vinam-piarahamoniny ny antoko Tia Tanindrazana ny alarobia 2 oktobra 2019, nandritra ny hetsika nataony tao amin'ny Le Pavé Antaninarenina Antananarivo. Miditra an-tsehatra lalindalina kokoa amin’ny raharaham-pirenena ny Tia Tanindrazana ankehitriny, hoy Ramanantsoa Schall, Sekretera jeneralin'ny antoko. Manana ny vinam-pampandrosoana mazava ny Tia Tanindrazana, izay mifototra amin’ny Fanabeazana, ny Fitsinjaram-pahefana tena izy ary ny Teknolojia, araka ny famelabelarana nataon'i Tahina Razafinjoelina, filoha nasionalin'ny antoko.
Notanterahina ny talata 01 oktobra teny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny Anosy ny fifamindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, izay minisitra misolo toerana ny Minisitry ny Raharaham-bahiny teo aloha, Andriantsitohaina Naina. Notsiahivin’ny Praiminisitra fa nandritra ny fotoana nitantanan’i Andriantsitohaina Naina ity ministera ity no tafapetraka ny sata manokana mifehy ireo « Agents diplomatiques et Consulaires ». Hisy manomboka izao ny fifandimbiasan’andraikitra eo amin’ireo mpiasan’ny masoivoho malagasy, « tsy hisy intsony olona iray hiasa ao anatin’ny 10 na 15 taona any amina masoivoho malagasy iray (consulat)», hoy ny Praiminisitra.
Namoaka tatitra ara-tarehimarika manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka notanterahina tamin’ny 27 mey 2019 ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) araka ireto hita amin’ny sary manaraka ireo. (Jereo Sary Tohiny)